Khabiirka Kala Duwan: Sida Loo Helo Daroor Google Analytics
Google Analytics ayaa ka warbixisa tiro badan oo website ah in ay noqdaan kuwo run ah oo aan la isku halleyn karin. Mid ka mid ah waa Daroor.com; warbixinnadii dhowaa waxay muujinayaan in aanay u dirin dadka rasmiga ah ee boggaga macaamiisha. Waxay micnaheedu tahay in barnaamijka cilmi-baarista ee muhiimka ah uusan waxba ka qabin xaqiiqada sababta oo ah waa robot oo xisaabinaysa tirakoobkaaga si qaldan.
Haddii aad hubisid goobaha Google Analytics ee qaybta soo gudbinta oo dhan, waxaad arki doontaa in daroogada.com daroogada ay u jirto inay dhaawacdo goobtaada iyo warbixinta Analytics. Dhamaan warbixinnada, Daroor ayaa muujinaya booqde cusub oo ka imanaya IP-ga cusub, heerkulku waa boqol boqolkiiba, taas oo ah dareen weyn oo loogu talagalay websaydhka. Waxaad sidoo kale ogaan doontaa in Google uu liiska blacklist ee Daroor iyo dhammaan adeegyada la xiriira. Sidaa darteed, gabagabeynta waa adeegyo sida tan aan marnaba loo isticmaalin marka la hirgelinayo website-kaaga
Max Bell, oo ah Sare Maamulaha Guusha Macaamiisha, ayaa sheegaya in ay run tahay in Daroor ay u dirto macaamiisheeda oo kaliya dhowr jeer soo booqde bishiiba, oo dhammaantoodna loo gudbiyo..Inta badan booqdayaashu waa been abuur; Si kastaba ha ahaatee, waxaad xisaabin kartaa wadarta guud ee aragtiyada gaarka ah adiga oo ku hadlaya magacaaga, waana inaanad ku tiirsanayn warbixinnada Daroor. Waxaa kale oo muhiim ah inaysan ku tiirsaneyn booqashadooda maaddaama ay dhammaan yihiin kuwo dhab ah. Haddii aad isticmaaleysid adeegyo blogging ah sida Blogger iyo WordPress, ka dibna waa kuu fududahay inaad xakameyso Daroor. Taas awgeed, waa in aad joojiso adeegahaaga in uu ka helo gaadiidka iyo shabakadaha kale ee la midka ah
Dib-u-qaadista Daaraan ma fududa
Waa run in meesha laga saaro Daaraan ma fududa. Waa inaad ka taxadartaa waxyaabaha badan. Tallaabada ugu horreysa waa inaad gashid koontada Google Analytics oo aad hubiso qaybta maamulka ee dhinaca midigta sare. Talaabada xigta waa in la abuuro shaandhada ama raadi shaandhooyinka horay ugu jirey geeska midig. Haddii aanad abuurin santuuqa, waa inaad abuurtaa oo aad si buuxda u heshaa qaybta maamulka. Talaabada sadexaad waa inaad gujisaa xulashada faylka cusub oo aad naftaada u abuurto shaandhada gaarka ah ee xogta Google Analytics. Bilowga, dhammaantood waxay qaadan doonaan wakhti, laakiin marka aad adigu sameysid oo aad sameysid dhowr fiilo, waxay kuu sahlanaan doontaa inaad hesho booqasho gaar ah boggaaga. Waxaad bedeli kartaa berrin kasta oo ku saleysan waxa aad horey u qabatay. Ujeedada kaliya ayaa ah in la joojiyo daroogada iyo fikradaha laga yaabo in ay ku dhex mareen qeybta qiiqa. Halkan waa inaad xakameysaa oo aad gujisaa xulashada kaydinta si aad u ilaaliso dhammaan goobaha la keydiyay. Filterskaagu wuxuu qaadan doonaa waqti aad ku noolaato. Waa inaadan hilmaamin in dhammaan talaabooyinkani ay muhiim yihiin. Haddii aad heshay gaadiid been abuur ah oo aanad waxba ka aqoonin tirakoobkaaga, markaa waa inaad xakameysaa cinwaanka IP-gaaga markii aad abuurtay fiilooyinka qaarkood. Dhammaan arrimahan ayaa xaqiijin doona in boggaga internetka uu helo bini'aadamka dhabta ah iyo dhabta ah xitaa marka ay yihiin tiro tiro yar. Wixii macluumaad dheeraad ah, waa inaad iska hubisaa dib-u-eegista boggayaga internetka oo akhri maqaalkeena ugu dambeeyay Source .